Tombontsoa ho an'ny fatiantoka
Ny fanehoan-tena dia fiantraikany ara-tsaina eo amin'ny tena, soso-kevitra amin'ny eritreritra, fihetseham-po, faniriana ary fahitana. Tsy hiresaka eto izahay raha ny fahazoan'ny autosuggestion ny fahazoana lanjany na tanjona iray hafa, alefaso fotsiny ireo ohatra vitsivitsy avy amin'ny fiainana izay hanosika antsika ny valiny marina. Ohatra, manomana fivoriana iray manan-danja eo amin'ny asa ianao, dia mihodikodina eo amin'ny sehatry ny fivoriana ianao, ary eritrereto ny fahombiazana sy ny sonia fifanarahana amin'ny mpiara-miasa. Ary momba ilay fahagagana, mitranga ny zava-drehetra araka ny eritreritrao. Moa ve izany? Na, ohatra, amin'ny maha-zaza anao, tsy te-hiditra an-tsekoly ny andro nidiranao tao amin'ny lisitry ny lisitry ny matematika ianao. Ary momba ny fahagagana, marary ianao! Ary tsy nidera ny ray aman-dreniny izy ireo, fa tena narary ary tsy nandeha an-tsekoly.
Ohatra avy amin'ny fiainana no soso-kevitra. Ny vokatra tena izy, ny asa sy ny vokatra azo avy amin'ny soso-kevitra ankapobeny dia efa voaporofo tamin'ny fomba fijery matetika. Isan'andro isika dia mahita ity fitsaboana mahagaga ara-psikolojika ity, saingy amin'ny antony dia tsy ny olon-drehetra no mampiasa izany mba hanatanterahana ny faniriany. Ny fitenenana maneho hevitra amin'ny iray amin'ireo tanjonao - ary ny fahaverezan'ny lanja, ary ny fiainan'ny tena manokana sy ny firoboroboan'ny harena.
Ahoana no handoavana ny lanjany miaraka amin'ny fanampiana amin'ny auto-suggestion?
Mariho fotsiny fa tsy ho voan'ny hipnotisin'ny tena irery ianao. Raha ny zava-drehetra, mba hamahana olana lehibe, dia ilaina foana ny fitaovana sy ny fomba fiasa. Noho izany, raha manapa-kevitra ny hanao ny endritsika isika dia tokony hifanaraka amin'ny fihinanana sy ny fanatanjahantena ny endriky ny hipnotisantsika.
Noho izany, aloha, mila mahatsiaro ny toe-javatra rehetra iainana eo amin'ny fiainana izay tena mahaliana anao indrindra sy ny vokany.
Ary ankehitriny, avelao ny faniriana mahery avy amin'ny lasa - raha te haniry (na tsy te-hahita) zavatra iray miaraka amin'ny vatana rehetra ao amin'ny fanahy, amin'izao fotoana izao, fotoana izay fotoana hanesorana ny livitra fanampiny. Ity no dingana voalohany mankany amin'ny firindrana amin'ny alalan'ny tolo-tena. Rehefa avy nampientanentana ny faniriana mafy ny hanana tarehimarika tsara tarehy ianao, eritrereto ny fomba hanohanana izany isan'andro. Amin'izany ianao dia hanampy anao amin'ny teny sy andian-teny izay soratanao amin'ny taratasy ary mianatra amin'ny fo. Ny tena zava-dehibe dia ny fanehoan-kevitra rehetra dia tokony hitondra hery tsara ary tsy misy fifandirana (ny "tsy").
Ohatra, "Tsara tarehy sy tsara tarehy aho." "Ho very maina aho. Efa manomboka mihamangatsiaka aho. "Avereno imbetsaka ireo fanehoana tsara ireo isan'andro isan'andro. Ary aoka ho azo antoka ny manonona azy rehefa manomboka matory ianao.
Ny dingan'ny fahaverezan'ny lanja miaraka amin'ny fanampiana amin'ny autosuggestion dia hanampy ary fomba fitsaboana tahaka izany, izay antsoina hoe "lifebuoy". Ao amin'ny efitranonao na ao an-trano dia fidio toerana iray izay ahafahanao mahazo aina tsara sy mipetraka irery. Azonao atao, ohatra, ny maka seza iray eo amin'ny balcony ary apetraho eny amin'ny zoro. Isan'andro, mandritra ny 2 herinandro, mipetrapetraka tsara eto amin'ity toerana ity, raha tsy manelingelina na inona na inona ianao, ary alaivo sary an-tsaina ny sarin'ny paradisa. Ohatra, ianao, mendri-piderana, tsara tarehy sy mahafinaritra, mandehana any amoron-dranomasina mahavariana amin'ny fasika fotsy fotsy, mitazona ny tànan'ny olon-tianao, mamirapiratra ny masoandro, sambatra ianao, tsara tarehy ... sns. ary ny toy izany. Mipetraha ao amin'ny kibonao mandritra ny minitra vitsivitsy, ankafizo ny sarinao ao amin'ny eritreritrao, ary mitsangàna ary mitsangatsangana ary manomboka manao ny zavatrao manokana.
Aorian'ny fampiofanana roa herinandro ny fisainanao dia ho lasa toeram-pivarotana iray ho anao ny toeranao. Amin'ny fomba ahoana? Tsotra tsotra izany - rehefa hihinana eo amin'ny tendanao ny fihinananao, rehefa tezitra ianao ka manonona ny teny hoe "hipnotisin-tena" dia mety ho diso hevitra ianao, izany hoe, rehefa miala amin'ny tsy fahombiazanao ianao, ary mieritreritra ny manipy ... mandehana any amin'ny toerana misy anao ary mipetraha eo roa minitra. Minoa Ahy, ho vokatr'izany ny valiny.
Ary ny zavatra farany, ny hipnotisin'ny sela ho an'ny fahavoazan'ny fahavoazana dia hiasa miaraka amin'ireo olona izay matoky ny fahasalamany sy ny faniriany. Tsy misy hypnosis ny tenany ary tsy misy ny hypnosis dia hanampy anao, raha tsy ny handehananao ny zavatra ataonao, ny fihetsika mifanaraka amin'ny tanjona. "Mandra-pahoviana isika no hiandry ny fahasambarana avy any an-danitra? Raha miandry ianao, ela be! "
Makà Action! Ary hahomby tanteraka ianareo rehetra!
Ny atidohan'ny vehivavy: 12 tombony + 6 fitoviana amin'ny lehilahy
Ny famantarana voalohany ny schizophrenia
Dementia - inona moa izany, ny karazany sy ny soritr'aretiny
Fiantrana sy fangorahana
Inona no tsy tokony hamonjy anao?
Ahoana no hitiavanao lehilahy tia anao?
Ny fomba hiasana havanana - torohevitra hendry
Vetivety dia novan'i Katy Perry ny volony sy ny volony
Ahoana ny fihetsiky ny lehilahy iray tia an'i Taurus?
Herin'ny akanjo fampakaram-bady
Karazana raozy - varieties
Seabass - fanatsarana
Sary mihetsika plasticine
Biopreparations amin'ny zaridaina sy ny lakozia
Ny Britney Spears dia nihira ny Happy Birthday ho an'ny mpiambina azy
Ahoana ny hanamboarana volo vy?
COPD - fitsaboana
Kornik miaraka amin'ny ovy
Ahoana no nanazavan'i Matt LeBlanc ny orsa amin'ny Courtney Cox?
Tovolahy akanjo lava